chii chinonzi induction shrink yakakodzera? induction inodonhedza akakodzera magiya nemhete
musha / Applications / Shrink Fitting / chii chinonzi induction chinodzika kukodzera
Category: Shrink Fitting Tags: tenga shrink yakakodzera heater, induction heat systems, Induction inopera fitting, induction kuderera kupisa, Shrink fitting, dzokera akakodzera magiya mavhiri, shrink zvakakodzera magiya, Shinda shaft yakakodzera, Shrink yakakodzera shaft magiya, chii chinonzi induction chinodzika kukodzera
Chii chinonzi induction shrink yakakodzera?
Induction inopera fitting chiitiko chakareruka chinosanganisira kudzvanywa kana kuwedzerwa kwechimwe chinhu pane chimwe kukonzera kupindira uye kusimudzira kwekumanikidza, kwakabata zvinhu zviviri izvi pamwechete.
Imwe neimwe nzira yekuchengetedza zvikamu muungano ine zvayakanakira. Kana iri yekukwirana inokodzera, zvikamu zvakagadzirwa kubva kune chero simbi zvinogona kuunganidzwa: simbi kune simbi, simbi kune mhangura, aluminium kune simbi, magnesium kune simbi, nezvimwe. Kazhinji, tembiricha dzinobatanidzwa mukudziya kwekuwedzera dzinonyanya kudzikira kudzivirira shanduko mu metallurgisheni chimiro sekunyongana kana kunyungudika. Nekuda kwekukwanisa kwekushushikana kusimbisa, simba rekudzikira kukodzera rinofanira kuongororwa mumasangano akakosha.
Mukuita, mashandiro acho ari nyore, achida kugadzirirwa kushoma kwenzvimbo, kudzora kushoma, uye pasina kuchenesa mushure memusangano kazhinji. Sezvo simba rekuchengetedza riri rechimakanika, zvepamusoro oxidation kana kusvibisa hazvipindire, kudzivirira chero chinodikanwa chekushandisa kubuda. Zvikamu zvakaunganidzwa nekukweva kukodzera zvinogona kubviswa nekusarudza kupisa chinhu chekunze. Maitiro aya anonyanya kukodzera kupisa induction neayo anokurumidza kupisa mwero uye kunyatsoita, zvichibvumidza kutsiva kwezvikamu zvakasakara kana kururamisa kwekuenderana.
Induction Kutya kazhinji inopa zvakasarudzika zvakanakira mukudzikira kukodzera. Kuchenesa kunogona kuve kwenzvimbo, zvichipa kuwedzera kwakaringana munzvimbo imomo kwekudzikira-kukodzera pasina kupisa chinhu chikuru chakakanda kana chakanyatsogadzirwa chinhu, zvichideredza kukanganisa. Uku kupisa nekukurumidza, kusarudzika zvakare kunofambisa dis-gungano rezvinhu zvinodzedzerera-zvakaringana, sezvataurwa pamusoro apa. Pamusoro pezvo, kupisa induction kunopa isina mwero, inokurumidza, inodzokororwa maitiro ayo anogona kuverengerwa mukugadzirwa kwekushomeka kwekubata uye nyore otomatiki.
HLQ induction heat systems anoshandiswa mumotokari indasitiri kudzikisa akakwana magiya nemhete. Ivo vanoshandirwawo kugadzirisa ndege, zvitima nemarori. Masystem edu enhare anoshandiswa kudzikisira akakodzera mabasa pamapuratifomu ekumahombekombe uye ari kuramba achishandiswa kubvisa hofori nzungu nemabhaudhi mumaturbine emagetsi emagetsi.
Kazhinji, simbi ichawedzera mukupindura kupisa uye chibvumirano kana kuchitonhora. Iyi yekudyira mhinduro kune tembiricha shanduko inozivikanwa sekuwedzera kwemafuta. Induction shrink yakakodzera ndipo patinoshandisa chiitiko ichi kuti tikwane kana kubvisa zvikamu. Chinhu chesimbi chinopisa kusvika pakati pe150 ° C ne300 ° C izvo zvinoita kuti chikure uye chibvumire kupinzwa kana kubviswa kwechimwe chinhu. Kana, semuenzaniso, kukamura zvikamu zviviri zvepombi pamwechete, chikamu chimwe chinodziyiswa kudzamara dhayamita yacho yawedzerwa zvakakwana kuti igadzikane pane chimwe chikamu. Kana zvikamu zvakasunganidzwa zvadzokera pakushambidzika, nzvimbo yekubatana inoomarara uye yakasimba - 'shrink fitted'. Saizvozvowo, kuwedzera kwekushisa kunogona kushandiswa kusunungura mubatanidzwa usati wabvarura.
Maitiro ekudzora, kusachinjika, kurongeka uye nekumhanyisa ndiwo mabhenefiti akakosha eiyo induction shrink yakakodzera. Induction kupisa kuendesa kwakanyatsonaka. Nekuda kwekuti kupisa kuri kugadzirwa mukati mechinhu, iwe unongopisa icho chikamu chaunoda kupisa, kwete iwo mhepo yakatenderedza. Zvakare nekuderedza njodzi yekusavapo, izvi zvinopa simba. Pamusoro pezvo, sezvo induction ichiburitsa yakanyanyisa kupisa kupisa, izvi zvinowanzo tendera kushoma kupisa kuti ushandiswe. Kudzora kwetembiricha kwakaringana nekunyatso kudzora kwenguva-kumusoro uye kubata tembiricha. Kusiyana neyakajairwa kudziya nzira, induction inosanganisira isina kupfeka murazvo. Izvi zvinobvumidza induction shrink yakakodzera kuti ishandiswe mumhando dzakasiyana siyana dzekushandisa munzvimbo dzisina kugadzikana, kunyanya mukushandisa petrochemical.
Mhando dzakasiyana maindasitiri uye mashandiro anogona kubatsirwa kubva mukudzikisira kushomeka kukodzera. Yedu induction kudziya masisitimu anoshandiswa mune mota indasitiri kudzikisa akakwana magiya, akatakura uye mhete. Ivo vanoshandiswa muindastiri indasitiri uyezve mukuchengetedza kwendege nezvitima. Masystem edu enhare anoshandiswa kudzikisira akakodzera mabasa pazvikepe uye kumahombekombe mapuratifomu uye ari kuramba achishandiswa kukodzera uye kubvisa hofori nzungu nemabhaudhi mumaturbine emagetsi emagetsi pamwe nemabheyari nemiseve mumagetsi emagetsi emagetsi.
Iyo induction yekudzora yakakodzera tekinoroji inowanzo shandiswa kune inotevera maitiro:
• Inokwana mumavhiri egiya (mapini pamiseve, nezvimwewo)
• Inovhara mafriji compressor
• Morse tapers yemuchina-maturusi
• Zvinotenderera zvikamu zvemagetsi.
Mashanu anosangana nezvinotsanangurwa zvemarudzi ese ezvigadzirwa zvehunyanzvi zveindasitiri yeaerospace nemaitiro anovimbisa kuderedzwa kunopera kukodzera kunyatsoita uye usashatise nzvimbo dzemukati, kunyanya kana uchiunganidza zvikamu zvisina kusimba.
Kunyunyuta kunokonzera Kukodzera Kuisa
Induction Inopera Fitting Shaft Gears
Induction Kuchenesa Shrink Steel Flange
Kuchenesa Kupera Fitting Machine